February 2020 – SHARRTZ.ORG
First Product “S Love Box” release from SHARRtz.org
SHARRtz.org မှ ပထမဆုံး ရေးဆွဲထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ “S Love Box” application ထွက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီ application လေးက AR နည်းပညာကို အခြေခံထားတဲ့ Card service လေးဖြစ်ပါတယ်။ S Love Box icon ပါတဲ့ မည်သည့် ကတ်ပြား၊စာရွက်ကိုမဆို S Love Box application လေးနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ဒီစရာ video/ ဓါတ်ပုံ/ စာသား အမှတ်တရတွေကို စာရွက်/ကတ်ပြားလေးထဲမှာ လှို့ဝှက်ထည့်သွင်းပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Application လေးဟာ ချစ်သူ စုံတွဲတွေနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် မောင်နှံလေးတွေအတွက် အဓိက ပြုလုပ်ထားတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ချစ်သူ စုံတွဲလေးတွေက ချစ်သူကို ပေးပို့တဲ့ postcard လေးထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာမောင်နှံလေးတွေကတော့ မင်္ဂလာဖိတ်ကြားလွှာလေးထဲမှာ မိမိတို့ရဲ့ ဖိတ်ကြားမှု video/ ချစ်စရာ video/ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဖိတ်ကြားချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ထည့်သွင်းဖိတ်ကြားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိတ်စာလက်ခံရရှိသူတိုင်းဟာလည်း မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ အလေးထားဖိတ်ကြားမှုကို ခံစားရတဲ့အပြင် မိမိတို့ ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ Video/ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကို SHARRtz.org မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Author Sharr Thet ZawPosted on February 5, 2020 October 2, 2020 Categories Design & TechLeaveacomment on First Product “S Love Box” release from SHARRtz.org
New product “S Love Box” and its service release.
SHARRtz.org launch first product “S Love Box” application.
“S Love Box” is the digital AR application which is designated for every relationship in the world. “S Love Box” deliver love talks and Love through cards and posters. “S Love Box” also designed for digital invitation for couples who are going to be marry.
For any other details, please see here.
See the explanation video below.
Author Sharr Thet ZawPosted on February 5, 2020 October 2, 2020 Categories ApplicationLeaveacomment on New product “S Love Box” and its service release.